Anna Musharrax baan ahay! | KEYDMEDIA ONLINE
Bashir M. Hersi - Qof adduun jooga addinkiisu ma laabmo, haddaan iilka la jiifin. Erayo ka mid ah hees uu ku xareediyo Alfannaan Axmed Rabsho (AUN) ayaa ahaa: Dhammideed adduunyada, Addin baan ku kooboo, Socod iima laabnee!
Heerarka nolshu kala tahay ayaa ah: nagi deganaan iyo naxdin dagaaga u dhaxaysa, midda dambe waa hoy, hergal iyo hoyaad la’aan, dhalandhool aan dhammaad lahayn ayey dhalisaa. Halka midda hore tahay guri nabada, geeddi nabada iyo guur nabada, Abwaan Maxamed Ibraahin warsame Hadraawi ayaa yiri:
Himilana ma duuganto, ee waxaa dilma qofka ay dareenkiisa ku daaban tahay! Hirgalinta himiladase waxaa masuul ka ah arrimahan: "Hoodo" [ayaan, ama nasiib “Hoodiyo ayaan baa, Lagu kala horreeyaa”] "Hiillo xilli" [Waligeed adduunyada, Waqtigaa qof saacida, Qofna waayaha xira!] "Hal adayg" [Dadaal gaari doon tide].